Ernesto Valverde Oo Shuruud Ku Xiray Inay Barcelona Saxiixyo Sameyso Suuqa Soo Socda Ee Janaayo
Barcelona ayaa ugu yaraan waxay ubaahan tahay saxiixyo cusub, oo gaaraya saddex, kuwaasi oo ka dheela daafaca iyo Goolhaye lagu xoojiyo midka haatan jooga. Suuqa ugu soo horeeya wuxuu imaanayaan Janaayo 2019, markaasi oo la filayo inay…
Ernesto Valverde Oo Wax Laga Waydiiyay Qorshaha Barca Ee Suuqa Janaayo Iyo Hadii Ay Saxiixyo…
Barcelona ayaa waxaa lala xiriirinayaa inay lasoo dhaqaaqeyso bisha Janaayo ee sanadka soo socda dhowr ciyaaryahano, kuwaasi oo qaybaha kala duwan ee garoonka ka dheela. Naadigaan reer Catalonia ayaa xidigaha sida loo hadalhayo waxaa kamid…
Ernesto Valverde Oo Shaaciyay Walaaca Ugu Wayn Ee Haatan Ay Wajaheyso Kooxdiisa Barcelona
Abdirahman	 Nov 28, 2018
Barcelona ayaa caawa la balansan dhigeeda PSV si ay ula dheesho kulan ciyaareed ka tirsan tartanka xiisaha iyo xamaasada badan ee Champions League. Ernesto Valverde oo kahor kulankaan warbaahinta la hadlay wuxuu muujiyay walaac ay…
Ernesto Valverde Oo Ka Warbixiyay Xaaladihii Ugu Dambeeyay Ee Dhaawacyadda Ciyaartoyda Barca
Abdirahman	 Nov 27, 2018
Barcelona ayaa waxaa lasoo dareysay walwal dhaawacyo ah, waxaana haatan ka warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay ciyaaryahan Ernesto Valverde. Macalin Valverde oo warbaahinta u waramay wuxuu sheegay in kooxdiisa aanu marnaba udhutin doonan…
Valverde Oo Farta Ku Fiiqay Xidiga Barca Ka Tirsan Ee Haysta Wax Aysan Haysan Kuwa Kale – Ma…
Abdirahman	 Nov 26, 2018
Ernesto Valverde, tababaraha Barcelona ayaa wuxuu amaan kala dul-dhacay ciyaaryahan Ousmane Dambele, kaasi oo uu ku tilmaamay xidig haysta wax aysan ciyaartoyda kale haysan. Balse, maamulihii hore ee Athletic Bilbao wuxuusan shaacin waxa…
Ernesto Valverde Oo Soo Xushay Kooxaha Barca Ka Hor-istaagi Inay Xagaagan Hanato La Liga
Barcelona ayaa waxay sanad ciyaareedka ay daafacaneysaa tartanka La Liga, kaasi oo ka xamaasad badan kuwii hore, maadaama uu isbedal xoogan yimid. Tababaraha Barca ninka lagu magacaabo Ernesto Valverde ayaa qiray inay jiraan kooxo, kuwaasi…
Valverde Oo Daboolka Ka Qaaday Hal Arrin Oo Sabab U Ah Guuldarada Ku Dhacday Kooxdiisa Barcelona
Barcelona ayaa guuldaro kharaar waxay kala kulantay dhigeeda Real Betis, taasi oo ahayd 4-3 xili ay labadda koox kuwada dheelayeen qalcadda Camp Nou. Dheesha kadib, tababare Ernesto Valverde oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in…
RASMI: Valverde Oo Ku Dhawaaqay Liiska Xidigaha U Dheelaysa Kulanka Real Betis Ee La Liga
Tababaraha Barcelona ayaa magacaabay liiska ciyaartoyda udheelaysa kulan ciyaareedka La Liga ka tirsan oo ay kahorjeedaan dhigooda Real Betis. Dheeshaan oo ah mid xiiso leh ayuu Ernesto Valverde usoo xushay ciyaaryahano kala duwan, kuwaasi…